နေ့စွဲ : 2021-03-10
လတ်တလော ကျော်ြကားသောအရာများ : 52
ချစ်ရတဲ့ ဖေဖေနဲ့ ချစ်သူကောင်လေးကို အရမ်း Hot သွားအောင် ပြောင်းလဲပေးမယ့် Project - Editor Yeni’s Pick
All In One Whitening Lotion 33,000ks > 19,900ks (40%)
Cleansing & Shaving Foam 25,000ks > 15,000ks (40%)
Cleansing & Shaving Foam + Lotion 58,000ks > 34,900ks (40%)
Skin tone အတွက် သေချာဂရုစိုက်ပေးလိုက်ရုံနဲ့ Hot Guy အဖြစ်ကို ပြောင်းလဲနိုင်ပြီနော် !! အခုဆိုရင် ယောကျ်ားလေးတွေလည်းပဲ အမျိုးသား skin care products တွေကို အသုံးပြုနေတဲ့ ခေတ်ကိုရောက်နေပါပြီ ! ကိုယ် ချစ်ရတဲ့ ဖေဖေ ၊ချစ်သူကောင်လေးကို လက်ဆောင်ပေးပြီးတော့ ပိုမိုခန့်ညားသွားအောင် ပြောင်းလဲပေးလိုက်နော်~ All in one product ဖြစ်တဲ့အတွက် လွယ်ကူရိုးရှင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ MANNERIC All in One Shaving-Cleansing Foam & MANNERIC All in One Lotion လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ
MANNERIC All in One Shaving & Cleansing Foam
မနက်ခင်းမှာ တစ်ချက်ခုတ် နှစ်ချက်ပြတ် အနေနဲ့ မျက်နှာလည်းသစ်ရင်း Shavingလည်းလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ အလုပ်ချိန် နောက်ကျမှာကိုစိုးရိမ်စရာမလိုတော့ပါဘူး~ Formula ကလည်း အသားအရည်အားလုံးအတွက် သင့်တော်ပါတယ်! မျက်နှာသစ်ဆပ်ပြာလိုအသုံးပြုနိုင်ပြီး ရေမဆေးခင် Shavingပါတစ်ပါတည်းလုပ်နိုင်ပြီနော်~!
MANNERIC All in One Lotion Toner,Serum,Cream ဒါတွေအားလုံး all in one ဖြစ်တဲ့အတွက် လွယ်ကူရိုးရှင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်လို့ သင်ချစ်ရတဲ့သူတွေအတွက် လက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါနော် ! ဒီ productလေးကို မျက်နှာသစ်ပြီးချိန်မှာ သုံးပေးလိုက်ရုံနဲ့ ညီညာပြီး ကျန်းမာဝင်းလဲ့တဲ့အသားအရည်ကို ဖန်တီးလိုက်ပါရှင့်
출처 : https://sskbeauty.com/Product/Category/list/cid/290